स्वास्थ्य Archives - ताजा समाचार
अमला अति स्वस्थकर फल हो । अमला खाँदा अमिलो र टर्रो भए पनि खाएको एकैछिनमा मुखमा मिठो स्वाद उत्पन्न हुन्छ । अमला एक बहुगुणकारी फल हो । गर्मि मौससमा धेरै रसिलो फल हो अमला । रसिलो संगै यसले स्वास्थमा धेरै फाईदा पुर्याउछ । अमलाको फल खादा मात्र होइन यसको छहारीमा बसेर खादा समेत स्वास्थमा धेरै फाईदा पुग्छ । अमलाले युवाहरुमा यौबन शक्ति प्रदान गर्नुका साथै बृद्धहरुमा युवाअवस्थामा जस्तै जोस जाँगर प्रदान गर्छ । तर अमलालाई दिनहुँ सेवन गर्नु भने पर्छ । यसलाई सुख्खा चुर्णको रुपमा अन्य औषधिको रुपमा, अचारको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो एउटा सानो पतझर रुख हो | अमला खानुस्, बिभिन्न समस्याबाट जोगिनुस् कब्जियत अमलाको सुकेको धुलोमा हर्रो र बर्रोको धुलो बराबर मिसाई एकदुई चम्चा सुत्ने बेलामा खाँदा बिहान दिसा खु्ल्छ । सुकेको अमलाको चूर्ण नियमित रूपमा पानीसँग सेवन गर्दा आउँ, अपच र कब
Oct112019 by ताजा समाचारNo Comments
Posted in अर्थ, स्वास्थ्य
काठमाडौं । काल्सवर्ग, टुवोर्ग, गोर्खा लगायत वियर उत्पादन गर्ने कम्पनी गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.को करछली प्रकरण सँगै अर्को कर्तुत खुलेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको अनुगमबाट गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादन टुवोर्ग वियर गुणस्तरहिन भएको भेटिएको हो। विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीका अनुसार, विभागले गत बैशाख ६ गते गोर्खा ब्रुअरीको नवलपरासीस्थित उद्योगमा अनुगमन गरि नमुना संकलन गरेर परिक्षण गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा ५ सय एमएलको टुबोर्ग स्ट्रोङ क्यान वियर गुणस्तरहिन भएको भेटिएको हो। ‘परीक्षणका क्रममा क्यान वियरको एलसी पर्सेन्टको मान नेपाल गुणस्तर २३ अनुरुप नभएको पाइएको छ,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘अर्कातिर लेभलमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको लेखिएको टुबोर्ग बियरको बोतलको परीक्षण गर्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा कम पाइएको छ। अल्कोहलको प्रतिशत कम भएकाले गुण
Oct92019 by ताजा समाचारNo Comments
आजभोलि सबैजसो घरमा साङ्लाको प्रकोप बढ्न थालेको छ। मानव विकाससँगै घरेलु साङलाको पनि विकास भएको पाइन्छ समयक्रम सँगै ती साङलाहरु शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। अहिले गाउँ तथा शहर सबैतिर साङ्लाको बिगबिगी बढेको छ । एउटा पोथी सांङलाले एक वर्षमा ३०० वटासम्म बच्चा जन्माउँछ। त्यसका कारण पनि साङ्लाको संख्या बर्सेनी बढ्दो छ । जसका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौ साङ्लाको प्रकोप बढ्ने खतरा छ। रसायनले शक्तिशाली यीनीहरुको नियन्त्रका लागि रसायनिक पदार्थको मिश्रण चलाइन्छ । यस्ता विषादीका विरुद्ध बच्ने गरी साङ्लाहरु आफै शक्तिशाली पनि बन्न थालेका छन् । बलिया साङ्लाले यो क्षमता बच्चाहरुमा पनि सार्छ। त्यसैले पनि सामान्य विषादी साङ्लाका लागि सामान्य जस्तै नै बनेका छन् । साङ्ला नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण गर्ने विधीमा विविधता ल्याउन आवश्यक छ । टासिने बस्तु वा भ्याकुम लगाउनु साङ्ला नियन्त्रणको उपयुक्त उपाय हो।
लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने ,छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्ने आदि लक्षण देखा पर्नु नै यसको लक्षण हो । यसबाट बच्ने घरेलु उपायहरू धेरै छन् ती मध्ये केही यहाँ भनिएको छ बेसारको पात बेसारको पातलाई सबैभन्दा राम्रो ग्यास्ट्रिकको औषधिको रुपमा मानिन्छ । दिनको एक ग्लास दुधमा चप गरेको बेसारको पात मिसाउनु र दिनहुँ पिउनुहोस् । यसो गर्दा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुँदै जानेछ । अम्बाको पात एउटा अम्बाको पात लिनुहोस् र त्यसलाई पानीमा उमाल्नुहोस् । यसलाई दिनहँु पिउँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुँदै जानेछ । आलुको जुस आलुलाई सफा गर्नुहोस् र त्यसपछि बोक्रा हटाई चप गरेर पानीमा उमाल्नुस् । दिनकै एक ग्लास ३ पटक ख
Posted in ब्यानर न्यूज, स्वास्थ्य
काठमाडौ । शिशुलाई हुर्काउन सारै गाह्रो छ । उनीहरुलाई कति बेला के हुने हो कसैलाई थाहा हुन्छ । एकैछिनमा ज्वरो आइहाल्छ । आफ्नो शिशुलाई ज्वरो आउँदा अभिभावक पनि शारिरिक र मानसिक रुपमा पीडित हुन्छन्। तर ज्वरो संक्रमणबिरुद्ध जुध्ने शरिरको आफ्नै तरिका हो। कतिपय अवस्थामा ज्वरो एक भाइरल संक्रमण हो जुन आफैं बिस्तारै निको हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि बच्चालाई उपचार र हेरचाहको आवश्यकता छैन। शिशुलाई उच्च ज्वरो आउँदा निम्न विषयमा बिचार पुर्याउनुपर्छ। एन्टिबायोटिक दिन हतार नगर्नुहोस्। हो कतिपय अवस्थामा १०१, १०२, १०३ डिग्री ज्वरो आएका बालबालिकालाई पनि एन्टिबायोटिक आवश्यकता पर्दैन। सामान्य प्यारासिटामोल सिरप खुवाएर पनि ज्वरो घटाउन सकिन्छ। स्मरणीय होस् ब्याक्टेरियाको संक्रमणले ज्वरो आएको चिकित्सकले पहिचान गरेपछि मात्र एन्टिबायोटिक दिइन्छ। हातको विशेष सरसफाई गर्नेः संक्रमणलाई न्यून गर्न पनि बारम्बार ब
काठमाडौ । पानी पिउँनु आफैंमा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर यो गर्मीमा पानीको विशेष महत्व हुने गर्छ । हामीलाई लाग्ने भन्दै धेरै रोगहरु पानीका कारण लाग्ने गर्दछन् । पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । तर खाली पेटमा पानी पिउँनु स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुनेछ । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ । यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो । वरिष्ठ पेट रोग तथा कलेजो रोग बिशेषज्ञ डा. संदीप राज कुवँर यदि मानिस स्वस्थ रहने हो भने पेटलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ मानिसका अधिकांश रोग खानपानबाटै उब्जिन्छन् । खानपानको पहिलो घर भनेको पेट हो । पेटलाई नै सबै कुरामा बचाउने हो भने अधिकांश प्राणघातक रोगबाट बच्न सकिन्छ । पेट स्वास्थ्यका लागि बिहानैको मनतातो पानी अमृत समान हुन्छ । खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने
अहिलेको समयमा मोबाइल फोन हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। हरेक समय हामी फोन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। मोबाइल सँग यति जोडिएका छौं, राति सुत्नु अघिसम्म मोबाइल स्क्रिनमै हराउने हामी बिहान उठ्नासाथै फोन मात्र देख्छौं। ब्युँझने बित्तिकै फोन चलाउने हाम्रो बानी भइसकेको छ। तर अध्ययनहरुले यसरी बिहान उठ्नासाथ मोबाइल चलाउँदा विभिन्न प्रकारका असर निम्तन सक्ने देखाएका छन्। पछिल्लो समय बेलायतमा करीब दुई हजार व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणबाट बिहान उठे लगत्तै मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुको दिनको शुरुआत तनावबाट हुने पाइएको छ। जसका कारण उनीहरुलाई आफ्नो नियमित काम गर्न असहज हुन्छ। विज्ञहरुका अनुसार, उठ्ने बित्तिकै जब हामी मोबाइलको नोटिफिकेशन देख्छौं, मस्तिष्कले त्यही विषयमा सोच्न थाल्छ। जसको कारण हाम्रो ध्यान दोस्रो काममा जाँदैन। त्यसले हाम्रो कार्यक्षमतामा असर पुर्‍याउँछ। बिहान उठ्नासाथ जब
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ अन्तर्गत पहिलो चरण ७५३ वटै स्थानिय निकायका ६ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुमा भिटामिन ‘ए’ र १ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधी खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । शिघ्र कुपोषणको एकिकृत ब्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको पोषणको अवस्था जाँच गर्ने, ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकालाई बुहुसुक्ष्म तत्व बालभिटा पोषणस्थिति लेखाजोखा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि स्थानियतहलाई जानकारी गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालायले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती प्रस्तुत विषयमा विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि यहि आउँदो कार्त्तिक २ र ३ गते राष्ट्रिय भिटामिन
सामान्यतया मेडिकल भाषामा ग्यास्ट्राइटिस भनिने ग्याष्ट्रिक एउटा लक्षण हो । पेटमा भरिने ग्यास कारण पेट दुख्ने, पेट पोल्ने, छाति पोल्ने, स्वर भासिने, कसै कसैको दाँत दुख्ने जस्ता समस्या नै ग्याष्ट्रिक रहेको पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. रविन शर्माले जानकारी दिए । ग्याष्ट्रिक हुने कारण ग्यास्ट्रिक कसै कसैमा मुटुको औषधि र पेनकिलरहरु बढी खाएमा पनि ग्याष्ट्रिक हुन्छ । चुरोट खाने मान्छेमा पनि ग्याष्ट्रिक हुन्छ । धेरै चिल्लो, पिरो अमिलोे, मसलेदार खाना बढी खानेलाई पनि ग्याष्ट्रिकको समस्या बढी हुन्छ। तनावका कारण पनि ग्याष्ट्रिके हुन्छ । ग्याष्ट्रिकका लक्षणहरू पेट फुलेको जस्तो लाग्ने, पेट दुख्ने, छाती र घाँटीमा पोल्न, दुख्ने, अमिलो डकार वा पानी आउनु ग्याष्ट्रिकको मुख्य लक्षण रहेको पाइन्छ । यसको अरु लक्षणहरुमा कहिलेकाहीँ बान्ता हुनु, कब्जियत हुनु, भुँडि ढाडिनु, टाउको दुख्नु पनि लक्षणहरु हुन् । जोखिम
संखुवासभा : संखुवासभामा पछिल्ला केही वर्षमा बढ्दै गएको सेतो पुतलीको प्रकोपका कारण एक जनाले आँखाको ज्यो,ति गुमा,उनु परेकाे छ । अहिलेसम्म खाँदबारीकी स्मृति घिमिरे, चैनपुरका युविका शाक्य, सिलिचोङ बालाका स्मृति कुलुङ, भूमिका कुलुङ लगायतका सात जनालाई सापु लागेको भेटिएको तेजरत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्र खाँदबारीका इन्चार्ज क्षितिज बरालले बताउनुभयो । तीमध्ये स्मृतिले आँखाको ज्योति नै गुमाएकी छिन् भने अन्यको उपचारपछि आँखा निको भएको छ । सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेपछि लाग्ने रोगलाई सापु (सिजनल हाइपरएक्युट पनुभिआइटिस) भनिन्छ । याे रोग लागेपछि ४८ घण्टाभित्र अस्पताल नपुगे दृष्टि, नै गु,म्ने ख,तरा रहने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यही राेगका कारण खाँदबारीमा बस्दै आएका माल्टाका खगेश्वर घिमिरेकी छोरी स्मृति घिमिरे आँखाकाे ज्योति नै गुम्याे । सूर्य आवसीय बोर्डिङ्ग स्कुलका उप प्रधानाध्यापकसमेत रहेका खग